Arin Lama Filaan ah Nuuc Kamid ah Duurjoogta Somalia Oo Qadar loo ogolaaday & NISA Oo .. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Arin Lama Filaan ah Nuuc Kamid ah Duurjoogta Somalia Oo Qadar loo ogolaaday & NISA Oo ..
Ahmed weheliye Gaashaan 6 October 2018
London ( Mareeg News ) Warqad kasoo baxday Dowlada Federalka Soomaaliya ayaa dowlada Qatar loogu ogolaaday ineey Dalkeeda u Daabulato nuuc kamid ah Duur joogta Ku nool keymaha soomaaliya .
Dowlada qatar ayaa aad u daneeyneysay mudooyinkii dambe ineey qaadato nuucya badan oo duurjoogta soomaliya ah balse Dowlada soomaaliya aayaa taa ogolaan karin maadaama cadiska shacabka iyo kan mucaaradka uu aad ugu badan yahay.
hey’ada nabdsugida iyo sirdoonka qaranka somalia Ayaa hada warqad kasoo baxday dowlada qadar loogu ogolaaday ineey qaadan karto kaliya 14 xabo oo Xeywaanka sagaarada ah oo aad looga helo gayiga soomaalida.
Wararka ayaa sheegay in tirada ay intaan ka badan karto maadama aan la ogeeyn Cida usoo qabata iyo goorta ay rarayaan.
Maamulka gobolka Banaadir oo mamnuucay in la soo dejiyo Mooto Bajaaj